Abaxhasi bemaski kunye neFektri- China Abavelisi beMask
Umbala oKhanyayo weBlue Umbala weSilika
Umbala oKhanyayo oPinki wombala weSilika
Le maski yobuso besilika yenziwe nge-100% ye-Mulberry silk, ethambileyo kwaye ephefumlayo, ikwanobuhlobo bolusu. Uyilo lwe-3D lufanelekile ukugubungela impumlo nomlomo wakho, iipateni ezininzi eziprintiweyo ezinje ngemivimbo yakudala, kunye nemibala yeyokhetho lwakho lwefashoni. Main Ilaphu: 16MM, 19MM Charmeuse ngelaphu, maleko ezimbini. Ubukhulu: 25cm x 15cm njengoko kuboniswa ngumfanekiso. Ukusika: uyilo lwe3D, ilingana ngcono, AKUWI phantsi xa uhamba okanye uthetha. Isihluzi sePokotho: Akukho siHlumelo seMpumlo sihlengahlengiswayo: Ewe I-Earloop ehlengahlengiswayo: Ewe Enye r ...
Umbala we-Beige Umbala weSilika